DJ Video Loop Five (Ocean) - NYE Countdown ho Djs, Vjs, Nightclubs 2020
Aza mipetraka amin'ny efijery mainty mandritra ny kitaponao! Na dia tsy manana ny lahatsary ho an'ny hira manokana aza ianao, mbola afaka manisy sary vendrana hitazomana ny haavony. Mbola tsara kokoa, ataovy ho iray amin'ny fehezan-tsarin'ny DJ misy anao, mifanaraka amin'ny anaranao. Ampitomboy ny marika manokana anao ary aza misalasala ny mihevitra fa vita ny kitaponao satria mivoaka ny efijery.
Ny lahatahiry ary ny fandaharana mozika dia misy amin'ny lahatsary ity, Mifandraisa aminay amin'ny antsipiriany.
SKU: OCLoop5 Sokajy: Specials Products
Avy amin'ny mpamorona ny NYECOUNTDOWN.com